3.2.	अरूलाई बताउने | Investigative Journalism Manual
Home > खण्ड > खण्ड दुई > 3.	ठोस स्टोरी कसरी तयार गर्ने ? > 3.2.	अरूलाई बताउने
स्टोरी कहाँ पुग्यो भनेर सोध्न पछि समय बिताउनु भन्दा यो समयमा ‘कम्तीमा यति काम’ भइसक्नुपर्छ भनेर पहिल्यै तोक्नु उपयोगी हुन्छ । स्टोरीको आइडिया पाउने बित्तिकै खोज गर्ने काममा संलग्न हुनसक्ने आफ्ना समाचार कक्षका मानिसलाई यसबारेमा बताउनुपर्छ । काम गर्ने समूह बनाउन र यस काममा संलग्न सबैबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न यस्तो गर्नु जरूरी छ । स्टोरी हुन्छ भन्ने लाग्ने बित्तिकै आफूले विश्वास गर्न सक्ने साथी र निर्णयकर्तालाई बताउँदा शक्तिशाली समूह निर्माणका लागि बलियो जग बस्छ । आफ्नो स्टोरीले पछि राम्रो ठाउँ पाउने वातावरण बन्छ ।
> तयार गर्न लागिएको स्टोरीका बारेमा अरूलाई बताउँदा सावधान हुनुहोस् । सबै रिपोर्टर उपस्थित भएको समाचार कक्षको बैठकमा हल्ला नगर्नुहोस् । कहिलेकाहीं यस्ता कुरा बताउँदा अरूले नसुनुन् भनेर ढोका थुन्नुपर्ने हुनसक्छ ।
> समूहका सदस्य छान्दा ध्यान पु¥याउनुहोस् । समूहका अरू सदस्य पनि सावधान हुनुपर्छ ।
> आफ्ना कामका बारेमा विस्तृत विवरण नदिनुहोस् । अहिलेसम्म यो प्रस्तावित स्टोरी मात्र हो । यसका बारेमा धेरै जानकारी जाँच्न बाँकी नै छ । आफूले अरूलाई बताएका जानकारी जाँच गर्न बाँकी नै छ, त्यसैले सावधान हुनुपर्छ भनेर बताउनुस् ।
संकेत, हल्ला र सुराक सही वा गलत के हुन् भन्ने थाहा पाइसक्ने बित्तिकै जानकारी खोज्न थाल्ने रहर हुन्छ । तर, अनुसन्धान थाल्नु पहिले कति वेला, के कस्ता काम, कसरी गर्ने भनेर योजना बताउनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले के गर्ने र खोज गर्नुभन्दा पहिले र खोज गरेका वेलामा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ रु अब आउने खण्डमा यी विषयमा प्रकाश पारिएको छ ।